သူဟာ အာဆင်နယ် အသင်း ခေါင်းဆောင် ရာထူးနဲ့ ဘာကြောင့် ထိုက်တန်မှု ရှိသလဲ ဆိုတာ ရှင်းပြလိုက်တဲ့ ဘယ်လာရင် - SPORTS MYANMAR
သူဟာ အာဆင်နယ် အသင်း ခေါင်းဆောင် ရာထူးနဲ့ ဘာကြောင့် ထိုက်တန်မှု ရှိသလဲ ဆိုတာ ရှင်းပြလိုက်တဲ့ ဘယ်လာရင်
March 20, 2020 - by Editor
အာဆင်နယ် အသင်း ညာနောက်ခံလူ ဘယ်လာရင် ကတော့ သူဟာ တခြား ကစားသမားတွေလိုမျိုး ကွင်းထဲမှာ အော်ဟစ် ညွှန်ကြားလေ့ မရှိပေမယ့် သူ့မှာ အသင်း ခေါင်းဆောင် အရည်အချင်း အပြည့် ရှိကြောင်း အာဆင်နယ် အသင်း ဝက်ဆိုဒ် နဲ့ အင်တာဗျူးမှာ ပြောကြား သွားခဲ့ပါတယ် ။
ဘာစီလိုနာ အသင်း ရဲ့ နာမည်ကျော် လာမာစီယာ အကယ်ဒမီ ကနေ အာဆင်နယ် အသင်းကို ၁၆ နှစ်သား အရွယ်မှာ ပြောင်းရွှေ့ ရောက်ရှိလာခဲ့တဲ့ ဘယ်လာရင် ဟာ နည်းပြကြီး အာဆင်ဝင်းဂါး အရောင်တင်ပေးခဲ့တဲ့ လူငယ် ကြယ်ပွင့် တစ်ဦးလည်း ဖြစ်ပြီး ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ခုနှစ် ဘောလုံး ရာသီက စတင်ပြီး အာဆင်နယ် အသင်းကြီးမှာ စတင် ပွဲထွက် ကစားခွင့် ရခဲ့ပါတယ်။
ဘယ်လာရင် ဟာ နည်းပြ အမ်မရီ လက်ထက်မှာ အသင်းခေါင်းဆောင် ငါးဦးထဲက တစ်ဦး ဖြစ်ပြီး နည်းပြ အာတီတာ လက်ထက် ချဲလ်ဆီး အသင်း နဲ့ ပွဲမှာလည်း အသင်း ခေါင်းဆောင် အဖြစ် ပွဲထွက် ကစားခွင့် ရခဲ့ကာ အသင်းအတွက် အရေးပါတဲ့ ချေပဂိုးကို သွင်းယူ ပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ် ။
မနေ့က အသက် ၂၅ နှစ်ပြည့် သွားခဲ့တဲ့ ဘယ်လာရင် က သူသာ အာဆင်နယ် အသင်း ခေါင်းဆောင် ဖြစ်ခွင့် ရပါက ဝမ်းသာ ပျော်ရွှင်မိမှာ ဖြစ်ကြောင်း နဲ့ သူ့မှာ အသင်း ခေါင်းဆောင် အရည်အသွေး ရှိတယ်လို့ ယုံကြည်ကြောင်း ပြောကြား လိုက်ပါတယ် ။
” ကျနော် ဘာစီလိုနာ အငယ်တန်းမှာ ကစားစဉ်ကတည်းက အသင်း ခေါင်းဆောင် သုံးဦးစာရင်းမှာ အမြဲပါပါတယ် ၊ ကျနော့်အတွက်က အသင်းခေါင်းဆောင် ရာထူးက မစိမ်းပါဘူး ။ အသက် ၁၄ ၊ ၁၅ တုန်းက အသင်းကို ဦးဆောင်ရတာနဲ့ အခုနဲ့ မတူတာ ကျနော် သိပါတယ်။ တာဝန်ယူရတဲ့အပိုင်း၊အသင်းကို ကိုယ်စားပြုရတဲ့အပိုင်းလည်း ကွဲပြားပါတယ် ။ ”
” ဒါပေမယ့် ကျနော်ကတော့ ဒီလို တာဝန်ယူရတာကို သဘောကျတာပါ ၊ အသင်းရဲ့ ရှေ့က မားမားမတ်မတ် ရပ်တည် ပေးရတာကို ကြိုက်တာပါ ။ ပြီးခဲ့တဲ့လ အနည်းငယ် တုန်းက နည်းပြနဲ့ စကားပြောဖြစ်တဲ့ အချိန်မှာ ကျနော့်ဟာ အသင်းရဲ့ ခေါင်းဆောင် တစ်ဦး ဖြစ်နိုင်ကြောင်း ပြောတော့ အရမ်းကို ဝမ်းသာ သွားပါတယ် ။ ”
” ကျနော် က ဒီကို ရောက်နေတာ အတော်လေး ကြာနေပြီ ဖြစ်သလို အသင်းအကြောင်းကိုလည်း ကောင်းကောင်း နှောကျေ နေပါပြီ ။ လူတွေက ကျနော်ဟာ ကွင်းထဲမှာ အော်ဟစ် ညွှန်ကြားမှု မလုပ်နိုင်တာကြောင့် အသင်းခေါင်းဆောင် အဖြစ် မြင်ကြည့်လို့ မရဘူးလို့ ပြောကြပေမယ့် အသင်းကို ဦးဆောင်ရာမှာ နည်းအမျိုးမျိုး ရှိပါတယ် ။ ”
” အသင်းကသူတွေက တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် လေးစားမှု အပြည့် ရှိကြပါတယ် ၊ နောက်ပြီး အသင်ဒ ခေါင်းဆောင် လက်ပတ် မပတ်ထားပေမယ့်လည်း အသင်းကို ဦးဆောင်နိုင်သူတွေ အများကြီးပါ ။ ကျနော်က ဒီမှာ ကြာပြီဆို​တော့ အသင်းခေါင်းဆောင် အမျိုးမျိုးနဲ့ ကြုံတွေခဲ့ဖူးပြီး သူတို့ဆီက အကောင်းဆုံးတွေကိုလည်း ရလိုက်ပါတယ် ။ ”
” ဒါတွေက ကျနော် အသင်း ခေါင်းဆောင် ဖြစ်ဖြစ် မဖြစ်ဖြစ် အသုံးဝင်တဲ့ အရာတွေပါပဲ ၊ကျနော် က အမြဲကူညီဖို့ အဆင်သင့် ရှိနေသူဖြစ်ပြီး အသင်းဘက်ပဲ အမြဲ ရပ်တည် သွားမယ့် သူမျိုးပါ ။ ”
” ဘာတွေပဲ ကြုံတွေ့ရသည် ဖြစ်စေ ရင်ဆိုင်ဖို့ ကြောက်နေမှာ မဟုတ်ပါဘူး ။ အသင်း အတွက် ကစားခွင့်ရတာကိုက ကျနော် အမြဲ ဂုဏ်ယူမိတဲ့ အရာပါ ၊ အသင်း ခေါင်းဆောင် အစုအဖွဲ့မှာ ပါဝင်ခွင့် ရတဲ့ အတွက်လည်း ဂုဏ်ယူမိပါတယ် ။ ” လို့ ပြောကြား သွားခဲ့ပါတယ် ။
အမေ့ခံတို့ရဲ့ သွင်းဂိုးတွေနဲ့ မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် ရဲ့ နောက်ထပ် Comeback တစ်ပွဲ
ပြင်သစ်သား ၃ဦး နဲ့ အင်္ဂလန်သား ၂ဦး အထူး ခြေစွမ်းပြခဲ့ကြတဲ့ ချဲလ်ဆီး ၃ – ၁ လိဒ်စ်ယူနိုက်တက် ပွဲမှ ခြင်္သေ့ပြာတို့ရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်များ ( Ratings )
အသင်းသစ်သာ ကြိုရှာထားရန် လီဗာပူး ကစားသမား တစ်ဦးကို တိုက်တွန်းလိုက်တဲ့ ဒါရင်းဘန့်
မက်ဆီ ကို အရ ခေါ်ယူနိုင်မယ့် နည်းလမ်းတွေကို ရှာဖွေနေတဲ့ PSG ၊ မက်ဆီ ရောက်လာမှ စာချုပ်သစ် လက်မှတ်ထိုးချင်တယ်လို့ မူနေတဲ့ နေမာ
December 5, 2020 - by Editor
ယူနိုက်တက် နဲ့ ကစားခဲ့တဲ့ ချန်ပီယံလိဂ် ပွဲစဉ် အပြီးမှာပဲ နေမာ ကိုယ်တိုင်က မက်ဆီ နဲ့ အတူတူ တွဲကစားချင်တယ်လို့ ထုတ်ဖော် ပြောဆိုခဲ့ပြီး နောက်ပိုင်း ၊ ပီအက်စ်ဂျီ နဲ့ မက်ဆီ တို့အကြား က အပြောင်းအရွှေ့ သတင်းတွေက တော်တော်လေးကို သွက်နေပါတယ်။ အသင်းနဲ့ နီးစပ်တဲ့ သူတွေ ရဲ့ ပြောပြချက် …
လေ့ကျင့်ခန်းပြန်ဆင်းနိုင်တဲ့ ဗန်ဒိုက် ၊ ဟက်ကာရန်က လွတ်သွားတဲ့ မန်ယူနိုက်တက် ၊ မက်ဆီ နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ငြင်းလိုက်တဲ့ PSG တို့နဲ့ . . . နံနက်ခင်း အားကစား သတင်းများ
အချက် ၂ ခုကို သဘောတူရင် UFC ကြိုးဝိုင်းထဲ ကို ပြန်လာမယ့် ခါဘစ်
ယူရိုပါလိဂ် ရလဒ်များ ၊ ရက်ဖိုဒ့် ရဲ့ ဒဏ်ရာ အခြေအနေ ၊ ပြန်ကစားတော့မယ့် ဆွာရက် တို့နဲ့ . . . မနက်ခင်း အားကစား သတင်းများ
ရိုနယ်ဒို ၊ ဘေးလ် တို့ရဲ့ မှတ်တမ်းကို မထင်မှတ်ဘဲ ရလိုက်တဲ့ အစ္စတန်ဘူလ် တိုက်စစ်မှူး
December 6, 2020 - by Editor
ခရစ္စတယ်ပဲလေ့စ် ၊ တော့တင်ဟမ် ဟော့စပါး ၊ အာဆင်နယ် တို့ ကို ရှုံးနိမ့် ခဲ့ အပြီးမှာတော့ မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် ဟာ ဒီရာသီ အတွက် ပထမဆုံး အကြိမ် အဖြစ် လန်ဒန် ကလပ် အသင်း တစ်သင်း ကို အနိုင် ရရှိ ခဲ့ပါတယ် ။ ဝက်စ်ဟမ်း ယူနိုက်တက် …